Pyae Phyo (MMiTD): May 2012
ကျွန်တော်အခုမျှဝေပေးချင်တဲ့ Software လေးကတော့ Uniblue DriverScanner လေးဘဲ
ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဒီကောင်လေးက ကွန်ပြူတာမှာလိုအပ်နေတဲ့ Driver တွေကို အလွယ်တကူဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်
ပါတယ်။ နောက်ဆုံးထွက်လာတဲ့ Version အသစ်လေးမို့ Version အသစ်ကြိုက်သူများအတွက်ရှယ်ပါဗျာ။
PC ကိုပိုမိုမြန်ဆန်လာစေသည့် Auslogics BoostSpeed Ver. 4.2.6.170
ကျွန်တော်ဟိုတနေ့က သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့ ကွန်ပြူတာဆိုင်ကိုရောက်သွားတယ်ဗျ။
အဲဒီမှာ ကောင်လေးတစ်ယောက်ကPC တစ်လုံးကို Auslogics BoostSpeed နဲ့ Maintenance လုပ်နေတာ
သူငယ်ချင်းများလည်း သုံးနိုင်အောင် ကျွန်တော်ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။
အမျိုးအစား: Maintenance , Registry
CCleaner Network Professional V1.10.823
ကွန်ပြူတာကို ပြုပြင်ထိမ်းသိမ်းတဲ့နေရာမှာတော့ ထိပ်တန်းစာရင်းဝင် Software တစ်မျိုး
ဖြစ်ပါတယ်။ CCleaner ကိုအရှေ့မှာလည်း Version အမျိုးမျိုးတင်ပေးဖူးပါတယ်။ အခုလည်း Version အ
သစ်လေးထွက်လာလို့ သူငယ်ချင်းတွေကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော ဘာလို့Sotware
တစ်ခုတည်းကို Version အမျိုးမျိုးနဲ့ ခဏခဏတင်ရလည်းဆိုရင် အရမ်းကောင်းလွန်းလို့ အသစ်တွေထွက်
အမျိုးအစား: Maintenance , Registry , Software
Boilsoft Video Joiner 6.57 With Key
ဒါလေးကတော့ Video File တွေကို အပိုင်းပိုင်း ဖြတ်တောက်ထားတာတွေကို ပြန်ပြီး ဆက်ပေး
မယ့် Software လေးပါ။ ကျွန်တော်အားလုံးနားလည်အောင် ရှင်းပြရရင် အများအားဖြင့်တော့ ဒီအတိုင်း
နေတဲ့ Video File တွေကို မပိုင်းဖြတ်ကြပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာကွန်နရှင်ညံ့လို့ Uploadတင်
ရင်သာပိုင်းဖြတ်ပြီးတင်ကြတာပါ။ အဲလိုမျိုးတင်ကြပြီဆိုရင်Video Joiner လိုမျိုး Software တစ်ခုခု နဲ့ပြန်ပြီး
All Converter v1.3.0+key
ကျွန်တော် Converter မတင်ပေးတာကြာလို့ အခုလည်း ဟိုစမ်းဒီစမ်းနဲ့ Converter လေး
ကျွန်တော်မျှပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ဒီကောင်လေးရဲ့နာမည်ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့တင် All Converter ဆို
တော့အားလုံးကို Convert လုပ်ပေးမယ့်သဘောပေါ့နော်။ မှန်ပါတယ်ဗျာ FileType တော်တော်များများကို
Convert လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဘာတွေလည်းဆိုတော့
ဒီဇိုင်းသမားများအတွက် CorelDraw Graphics Suite X6 ကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ဒါလေး
ကတော့နောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ Version အသစ်လေးဖြစ်ပါတယ်။အမြဲတမ်းအသုံးပြုနိုင်အောင်ကျွန်တော်
Keygen လေးကိုပါ ထည့်ပေးထားပါတယ်ဗျာ။အသုံးပြုနည်းစာအုပ်ကိုလည်းအရှေ့ကPost တွေမှာတင်ထား
ပေးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။အခု Version X6 ကိုလည်း စာအုပ်လေးထွက်လာရင်တင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
iOS 5.1 အား Jailbreak လုပ်နည်း (Tethered Jailbreak)
ကျွန်တော် အခု တဆင့်ပြန်လည်မျှဝေပေးချင်တဲ့ Post လေးကတော့ Myanmar Mobile Development ကနေပြီး ဖော်ပြပေးထားတာလေးဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ဖုန်းအကြောင်းကို သိပ်ပြီးနားမ
လည်ပါဘူး ကိုယ်တိုင်ရေးရင်အမှားပါနိုင်တာကြောင့် ဖော်ပြပေးပြီးသား Post လေးများကိုသာ ပြန်လည် တင်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အခု Phone နဲ့ပတ်သတ်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ iPhone 4S နှင့်
iPad2 နဲ့ iDevice တွေမှာ Tethered Jailbreak ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အောက်မှာ ပုံနှင့်တကွရှင်းပြပေး ထားပါတယ်ဗျာ။
ကျွန်တော်တို့ အင်တာနက်ကိုစသုံးခါစတုန်းက အသုံးပြုခဲ့ရတဲ့ Browser ကတော့ IE လို့
လူသိများတဲ့ Internet Explorer ဘဲဖြစ်ပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်းမှာ Mozilla Firefoxဆိုတဲ့ Browser ပေါ်
လာတော့ အဲဒါကိုပြောင်းလည်းအသုံးပြုလာကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့်IE ကိုဘဲဆက်လက်သုံးစွဲနေတဲ့ သူတွေ
လည်းရှိပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့် IE ကိုချစ်သူများအတွက် အခု Internet Explorer 9.0 ကိုတင်ပေးလိုက်
ပါတယ်ဗျာ။ဒီကောင်လေးကတော့Window Vista သုံးစွဲသူများအတွက်သာဖြစ်ပါတယ်။
အမျိုးအစား: Internet Tools
ကျွန်တော်အခုပြန်လည်မျှဝေပေးမယ့် Software ကတော့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံ
ရဲ့ ကွန်နရှင်နဲ့ဆိုအဆင်ပြေမယ့် Software လေးဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကောင်လေးက Firefox တို့ Skype တို့ နဲ့ Chrome တို့ကို Double Click နှိပ်လိုက်ရုံနဲ့တင် Auto Speed မြှင့်တင်ပေးမှာဘဲဖြစ်ပါတယ်။
Android Phone အတွက် Yangon & Mandalay လမ်းညွန်
ဒါလေးကိုကျွန်တော် ရထားတာကြာပါပြီ တင်မယ်တင်မယ်နဲ့ အခုမှဘဲတင်ဖြစ်သွားပါ
တယ်ဗျာ။ Android Phone ကိုင်ဆောင်ထားသူများအတွက်တကယ့်ကိုအသုံးဝင်မယ့် Application လေး
တစ်ခုပါ။ အချိန်တိုအတွင်းမှာဘဲ မိမိသိချင်တဲ့ နေရာတွေရဲ့လိပ်စာ ဖုန်းနံပါတ်တွေကို အလွယ်ကူဆုံး နဲ့အ
မြန်ဆန်ဆုံးရှာဖွေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးထွက် 2012 Version လေးပါ။ Yangon နဲ့ Mandalay မှာရှိ
တဲ့ ဆေးရုံဆေးခန်း ၊ ဌာနဆိုင်ရာ ၊ ဟိုတယ် ၊ ဈေး ၊ ဆိုင် ၊စတာတွေရဲ့လိပ်စာနဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေကို Update
Need for Speed Underground 2(PC Game)
ကားမောင်းတာဝါသနာပါတဲ့သူငယ်ချင်းများအတွက် အရမ်းလန်းတဲ့ Need for Speed
Underground-2 ကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ဒါလေးက ကျွန်တော်တို့ PS-2 Game မှာကစား
ခဲ့တာကြာပါပြီ။ ဒါလေးကတော့ကွန်ပြူတာနဲ့ကစားချင်သူများအတွက်ပါ ဒီကောင်လေးက Windows 98/Me/2000/XP မှာဘဲကစားလို့ရပါတယ်။ Window7နဲ့ Vista မှာတော့ကစားလို့မရပါဘူး။ အမြဲတမ်း
ကစားနိုင်အောင် Full Version လေးဘဲတင်ပေးထားပါတယ်။
မိမိလက်မခံချင်တဲ့ ဖုန်းနံပါတ်တွေကို Block လုပ်ပေးမယ့် Call Blocker v5.23
အခုမျှဝေပေးချင်တာလေးကတော့ ဖုန်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ Post လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် အလုပ်များတက်တဲ့ သူငယ်ချင်းများအသုံးဝင်နိုင်ပါတယ်။ ဒီကောင်လေးက မိမိလက်ပြီးစကား
မပြောချင်တဲ့ ဖုန်းနံပါတ်တွေကို Black List စာရင်းသွင်းထားလို့ရတဲ့ Software လေးပါ။ မိမိ လက်မခံချင်
တဲ့ဖုန်းတွေက ဆက်လာပြီဆိုရင်ဒီကောင်လေးက အလိုလျှောက် ဖုန်းကိုဖြတ်တောက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
Cafezee v3.9 Software & Using Guide (Ebook)
Cafezee ကိုလိုချင်လို့တောင်းထားတာကြာပါပြီ။ အခုမှဘဲပြန်တင်ပေးနိုင်တယ်ဗျာ။ ဒီတစ်ခါ
တော့ကျွန်တော် Software အပြင် အသုံးပြုပုံကိုပုံနှင့်တကွရှင်းပြထားတဲ့ User Guide ပါ ထည့်ပေးလိုက်
ပါတယ်ဗျာ။အင်တာနက်ဆိုင်မှာ အသုံးပြုချင်တဲ့သူငယ်ချင်းများ လိုအပ်မယ်ဆိုရင်အောက်က Linkမှာဒေါင်း
အမျိုးအစား: Ebook , Internet Tools
Pfingo for PC & iphone , ipad , Android
အမတစ်ယောက် (VIP) က တောင်းထားလို့ Pfingo လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ မရှိသေးသောသူငယ်ချင်းများလည်းလိုအပ်ရင်ဒေါင်းယူထားနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ အခု Pfingo ကတော့ iphone , ipad , android , ဖုန်းများအတွက် နဲ့ PC အတွက် အသုံးပြုနိုင်အောင် သူ့ရဲ့ Home Page ကိုဘဲ Link
အမျိုးအစား: Internet Tools , Phone
VZO Chat Portable v 6.3
အမတစ်ယောက် (VIP) က တောင်းထားလို့ VZO Chate လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ မရှိသေးသောသူငယ်ချင်းများလည်းလိုအပ်ရင်ဒေါင်းယူထားနိုင်ပါတယ်ဗျာ။Portable လေးဆိုတော့ Install လုပ်စရာမလိုပါဘူး။ Double Click နှိပ်ပြီးတန်းသုံးရုံပါဘဲ အားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်။VZO Chat ကိုတော့
ဘာရယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာ လိုအပ်သူများရှိရင် ဒေါင်းယူသွားနိုင်အောင်လို့တင်ပေးလိုက်
ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ WinRAR.4.20.Beta.2. လေးပါ။ ဒီ RAR ဆိုတာမျိုးကလည်း ကွန်ပြူတာတိုင်းမှာ မရှိ
မဖြစ် Install လုပ်ထားရမယ့် Software လေးပါ။ Version အသစ်ထွက်လာလို့ တင်ပေးလိုက်တာပါဗျာ။
ကျွန်တော့်ရဲ့ ထုံးစံအတိုင်းဘဲ Full Version လေးဘဲတင်ပေးထားပါတယ်နော်။
Adobe Illustrator အသုံးပြုနည်း မြန်မာဘာသာပြန် (Ebook)
Designer များအတွက် ရွေးချယ်ပြီး Adobe Illustrator အသုံးပြုနည်းစာအုပ်လေးကိုမျှဝေပေး
လိုက်ပါတယ်ဗျာ။ စာအုပ်ထဲမှာလည်း အသုံးပြုနည်းတွေကို Tools တစ်ခုချင်းစီအလိုက် ပုံလေးတွေနဲ့သေ ချာစွာရှင်းပြပေးထားလို့ အခုမှ Design ကိုစတင်လေ့လာချင်သူများအအတွက်လည်းသင့်တော်ပါတယ်
အမျိုးအစား: Design , Ebook
မိမိသုံးနေတဲ့ ကွန်ပြူတာကို တစ်လတစ်ခါ ဒါမှမဟုတ် နှစ်ပါတ်ကိုတစ်ကြိမ်လောက် Maintenance လုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ ဒါမှအမြဲတမ်းသုံးနေတဲ့ ကွန်ပြူတာက ရည်ရှည်အသုံးခံနိုင်မှာဘဲဖြစ်ပါ
တယ်။အမြဲတမ်းလည်းပေါ့ပါးသွတ်လက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ကွန်ပြူတာမှာ ဖြစ်ပေါ်တက်တဲ့ Registry Error
တွေကိုလည်း ဖြေရှင်းရပါမယ်။ ပြီးတော့Disk ကိုလည်း Clean လုပ်ပေးရပါဦးမယ်။ အဲဒါတွေအပြင် PC ကို
ပြုပြင်ထိန်းသိမ်း ရမယ့် အချက်တွေ အများကြီးလုပ်ရပါမယ်။ ဒါတွေအားလုံးကို Software တစ်မျိုးတည်းနဲ့ Runလို့ရပါတယ်။
CD Drive ပျောက်နေသူများအတွက်
ကျွန်တော့်ကိုတော်တော်များများမေးဖူးတယ်ဗျ CD-Drive ပျောက်နေလို့ ဘယ်လိုပြန်ရှာရ
မလည်းဆိုပြီးမေးကြတယ်ဗျာ။ မေးတုန်းကတော့ ကျွန်တော်ပြန်ပြီးမဖြေနိုင်ခဲ့ပါဘူး။အဲဒါနဲ့နည်းလမ်းတစ်ခု
ကိုလိုက်ရှာရင်းနဲ့ ကျွန်တော်ရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။CD-Drive ပျောက်နေတဲ့သူငယ်ချင်များလွယ်လွယ်ကူကူ
ပြန်ရှာနိုင်အောင်လို့ CD-Drive ပြန်ဖော်နည်းကို Video File လေးမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။
Zemana Antilogger 1.9.1.15
အင်တာနက်ဆိုင်တွေမှာ အသုံးပြုသူတော်တော်များများဆောင်ထားသင့်တဲ့ Software
လေးတစ်ခုပါ။ Zemana Antilogger 1.9.1.15 လို့အမည်ရပါတယ်။ မိမိရဲ့ Password နဲ့ မိမိရဲ့ လုပ်
ဆောင်ချက်တော်တော်များများကို ခိုးယူနိုင်တဲ့ logger ရန်မှာကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ တချို့သူငယ်ချင်း
တွေနားလည်အောင်ရှင်းပြရရင် Antivirus နဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ချင်း တူပါတယ်။ Antivirus က Virusတွေကို
ဖယ်ရှားရှင်းလင်းပေးပြီး Antikeylogger ကတော့ Data တွေကိုခိုးယူနိုင်တဲ့ logger တွေကိုဖယ်ရှားရှင်း
Windows Loader V 2.1.2 (Window7, Vista , Server 2008)
Original Window (Licenses Version) မဟုတ်တဲ့ Window များအတွက် အသုံးလိုမယ့်
Windows Loader v2.1.2 လေးကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ဒီ Loader လေးက Windowတိုင်း
လိုလိုကို Activate လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ အသုံးပြုပုံလေးကလည်းအင်မတန်ကိုလွယ်ကူရိုးစင်းပါတယ်။
Windows Loader.exe ကို Run လိုက်ပါ။ ပြီးသွားရင် အောက်မှာ Install ဆိုတဲ့ အကွက်လေးရှိပါတယ်။
Smackdown Vs Raw RIP Full Version For PC Game
PC အတွက် Game လေးတွေမတင်ပေးရတာကြာလို့ အင်တာနက်မှာ လိုက်ပြီးမွှေနှောက်
ကြည့်လိုက်တော့ Smackdown Vs Raw ဆိုတဲ့ PC Game လေးတစ်ခု သွားတွေ့ပါတယ်ဗျာ။ ဒါကြောင့်
ပြန်ပြီး မျှဝေပေးလိုက်ရပါတယ်ဗျာ။ အခုGame လေးက Full Version လေးပါဘဲ။ သူ့ရဲ့ လိုအပ်တဲ့ System Requirement လေးတွေလည်း အောက်မှာဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။
Internet ကနေပြီး Mobile Phone များသို့ အလကား Message ပို့မယ်။
ပါတယ်။ဒီကောင်လေးက ဘယ်လောက်တောင်အဆင်ပြေလည်းဆိုရင်Register လည်းလုပ်စရာမလိုဘူးဗျာ
တစ်ခါတည်းတန်းပြီး နိုင်ငံရွေး ဖုန်းနံပါတ်ရေးပြီး Message ရိုက်ပြီးတာနဲ့ တန်းပို့ရုံးဘဲဗျာ။ အရမ်းလွယ်ပါ
တယ်။ဒါလေးကိုကျွန်တော်သိတာမနေ့ကမှ သိတာဗျ။ ကိုချစ် ပြောလို့သိတာကိုချစ်ကြီးဆီကိုလည်း ကျွန်
တော်စမ်းပြီးပို့ကြည့်ပြီးသွားပြီဗျာ။ အားလုံးအဆင်ပြေတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကနေပြီး ဘယ်နိုင်ငံကိုမဆိုပို့လို့
Blog မှာ Page Navigation ကို ထည့်သွင်းနည်း
မိမိရဲ့ Blog မှာ Page Navigation ထည့်သွင်းနည်းလေးကို ကျွန်တော်မျှဝေပေးလိုက်
ပါတယ်ဗျာ။ အောက်မှာလည်း သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့Code လေးတွေကိုပေးထားပါတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော်ပြထား
မကြည့်စေချင်တဲ့ Website တွေကိုပိတ်ပေးနိုင်တဲ့ Anti-Porn.17.7.5.8 (With Patch)
အခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ Software လေးကတော့ မိမိမကြည့်စေချင်တဲ့ Website တွေကို ပိတ်ထားပေးမယ့် Software လေးပါ။ ဘယ်လိုနေရာတွေမှာအသုံးများသလည်းဆိုရင်တော့ရုံးတွေအင်တာ
နက်ဆိုင်တွေမှာ အသုံးများပါတယ်။ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့မကိုက်ညီတဲ့ Website တွေကိုပိတ်ချင်ရင် ၊ နိုင်ငံ
ရေး Website တွေကိုပိတ်ချင်ရင်တော့ ဒါလေးကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အခုအချိန်မှာတော့ နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်
သတ်တဲ့ Website တွေကိုပိတ်ဖို့တော့မလိုတော့ပါဘူးနော်...ဟဲဟဲဟဲ။
Folder Lock 6.2.5 Portable
ဒီတစ်ခါတော့ မိမိရဲ့ Data တွေကို ဘယ်သူမှဖွင့်လို့မရအောင် Password ပေးပြီးပိတ်ထား
တဲ့ Software လေးတစ်ခုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ဒီကောင်လေးကတော့လူသိများကြတဲ့ Folder Lock
6.2.5 Portable လေးဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တင်ပေးကျပုံစံလေးအတိုင်းဘဲ Full Version ဘဲတင်ပေးထား
ပါတယ် Serial Key လေးပါထည့်ပေးထားပါတယ်ဗျာ။ Portable လေးဆိုတော့လူတိုင်းကြိုက်ကြမယ်လို့
အမျိုးအစား: Portable , Security , Software
HTML ရဲ့ အခြေခံသဘောတရားများ (Ebook)
ဒီစာအုပ်လေးထဲမှာ HTML နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ Code လေးတွေအကြောင်းကို အသေးစိတ်ရှင်းပြပေးထားလို့
ပါ။ကိုယ်ပိုင် Website မှာ ပြင်ဆင်ချင်တာလေးတွေကိုအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်နိုင်ဖို့ ဒီစာအုပ်လေးကအ
Internet Connection ကိုမျှဝေပေးမယ့် Connectify 3.4 Pro
အခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ Software လေးကတော့ ကျွန်တော့် Site ထဲမှာ တစ်ခါမှမတင်
ဖူးသေးတဲ့ Software လေးပါ။ ဘာလေးလည်းဆိုတော့ ကိုယ့်မှာရှိနေတဲ့ Internet Connection ကို အခြားသူတွေကိုမျှဝေပေးမယ့် Software လေးပါ။ ဒီကောင်လေးရဲ့ နာမည်ကတော့ Connectify 3.4 Pro ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့အကြောင်းကိုအသေးစိတ်သိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီမှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်ဗျာ။
ကျွန်တော် အခုမျှဝေပေးချင်တဲ့ Software လေးကတော့ Gtalk Theme လေးပါ။ဘာရယ်
တော့လည်းမဟုတ်ပါဘူး ကျွန်တော်တို့တွေအသုံးပြုနေတဲ့ အမြဲတမ်းGtalk လေးကကြည့်ရတာ ရိုးအီနေ
ပါပြီ။ ဒါကြောင့် နောက်ခံ ပုံလေးပြောင်းသုံးရင်းနဲ့ အမြင်ဆန်းစေဖို့အတွက် ကျွန်တော်မျှဝေပေးလိုက်တာ
အမျိုးအစား: Software , Theme
Android V3.2.6 Phone များအတွက် Spider-Man Total Mayhem HD Game
Android ဖုန်း ရှိသူများ အတွက် Game လေးတစ်ခုတွေ့လို့ ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ရပါတယ်ဗျာ။ Game ကတော့ Spider Man Total Mayhem HD Game အမျိုးအစားဘဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော့် သူငယ်
ချင်း Phone မှာတော့ ကစားလို့ ကောင်းတယ်ဗျ။ HD Game ဆိုတော့လည်း ရုပ်ထွက်ကပြောစရာမလိုပါ
CSS ကိုလေ့လာချင်သူများအတွက် Learning CSS (Ebook)
ကျွန်တော် CSS နဲ့ အကြောင်းကိုသေချာစွာရေးသားထားတဲ့စာအုပ်လေးတစ်အုပ်ကို ပြန်
လည်မျှဝေပေးချင်ပါတယ်ဗျာ။ Css ရဲ့ဆိုတာကတော့ Cascading Style Sheet ဘဲဖြစ်ပါတယ်။ Css က Web Design ရေးဆွဲရာမှာ အသုံးပြုတဲ့ ဘာသာရပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဘယ်လိုသုံးလဲဆိုရင် သူ့ကို external File Aနေနဲ့ရော ၊ HTML ထဲလည်း ရောပြီးသုံးနိုင်ပါတယ်။
English to Myanmar dictionary for Iphone,Ipad,Ipod touch
ဒါလေးကတော့ iphone ,ipad , ipod touch တွေမှာ သုံးတဲ့ Dictionary လေးဖြစ်ပါ
တယ်။ လိုရမယ်ရ အသုံးလိုရင် အလွယ်တကူယူနိုင်အောင်ကျွန်တော် မျှဝေပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
အမျိုးအစား: Dictionary , Phone
Gtalk မှာ မိမိနားထောင်နေတဲ့သီချင်း ကိုပေါ်နေစေဖို့အတွက်
Gtalk မှာ မိမိနားထောင်နေတဲ့သီလေးလေးပေါ်ချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ ကျွန်တော့်ကို Mail မှာ ခဏခဏ မေးဖူးတယ်ဗျ။အဲဒီအချိန်တုန်းကတော့ ဘာမှန်းမသိသေးတာနဲ့ဘဲ မဖြေဖြစ်ဘူးဗျာ။ အခုမှဘဲ နည်းလမ်းလေးတစ်ခုတွေ့ထားလို့ ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ရပါတယ်ဗျာ။သိပြီးသားသူငယ်ချင်းများ
လည်းရှိပါတယ်။ ကျွန်တော် က မသိသေးသူများအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးမျှဝေပေးလိုက်ရပါတယ်။ နည်းလမ်းက
Android Phone အတွက် Application အသစ်များ
အခုနောက်ပိုင်းမှာ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ Android ဖုန်းတွေတော်တော်များများ အသုံးပြု
လာကြပါတယ်။ လူသုံးများလာတဲ့အတွက် လူတိုင်းစိတ်ဝင်စားစေမယ့် Android ဖုန်းအတွက် Application
အသစ်တွေကိုတွေ့ထားလို့ အားလုံးအတွက် ပြန်လည်ပြီးမျှဝေပေးချင်ပါတယ်ဗျာ။ ဒါလေးကိုကျွန်တော်သူ
များဆီကနေယူသုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Bro မောင်ညီ ဆီကနေယူပြီး ပြန်လည်မျှဝေပေးထားတာဖြစ်ပါ
တယ်ဗျာ။ အောက်မှာလည်း ပါဝင်တဲ့ Application အသစ်တွေကို ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
Dfx Audio Enhancer (အသံနှစ်ဆပိုကျယ်စေရန်နှင့် Audio လိုသလို ပြုပြင်နိုင်ရန်)
Audio ပိုင်းဆိုင်ရာ Software လေးတစ်ခု ကိုပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ဒီကောင်
ကောင်လေးကတော့ Sound ကို နှစ်ဆလောက်ကို ထပ်ပြီးချဲ့ပေးနိုင်ပါတယ်။ပြီးတော့အသံကိုလည်း မိမိ
လိုချင်တဲ့ အနေအထားရောက်အောင် ညှိယူနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ အသံထွက်လေးလည်း ကောင်းပါတယ်။
Angry Birds - Birthday Party 2.0.2 For Nokia
Nokia စမတ်ဖုန်းများ အတွက် Game လေးတစ်ခုရထားပါတယ်ဗျာ။ ဘာGame လည်း
ဆိုတော့ အခုတလောနာမည်ကြီးလာတဲ့ Angry Birds လေးဘဲဖြစ်ပါတယ်။ Version ကတော့ Birthday Party 2.0.2 ဖြစ်ပါတယ်။ ကစားနိုင်တဲ့ Phone Model တွေကတော့ Nokia စမတ်ဖုန်းတွေဖြစ်တဲ့ Nokia N8 , Nokia N97 , Nokia N6 , Nokia E7 , Nokia C6 , Nokia C7 , Nokia X6 , Nokia X7 စတဲ့ ဖုန်း
Window အားလုံးရဲ့ Password တွေကို ကျော်ချင်သူများအတွက် CD တစ်ချပ်
အခုသူငယ်ချင်းများကိုမျှဝေပေးချင်တဲ့ Software လေးကတော့ Window Password မေ့
သွားသူများနဲ့ Window Password ကို မသိဘဲ ကျော်ပြီးဝင်ချင်သူများအအတွက် Bootable CD လေးတစ်
ချပ်ပါ။ ကျွန်တော်တင်ပေးထားတဲ့ File လေးကို ဒေါင်းယူပြီး CD လေးကူးလိုက်ပါ။ ပြီးသွားရင် စက်ကို Restart ချပြီး First Boot ကို CD-Romပေးလိုက်ပါ။
အမျိုးအစား: Security , Software , Window
Wifi Hacking Beginner (Ebook)
ကျွန်တော်စာအုပ်လေးတစ်အုပ်ရထားလို့ သူငယ်ချင်းများအားလုံးလည်း စိတ်ဝင်စားမယ်
ထင်လို့ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ဒီစာအုပ်လေးကတော့ Wifi Hacking ကို Beginner Level အ
တွက်ရေးသားပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါလေးကတော့ Wifi ကို ခိုးဖို့အတွက်ရေးထားတာမဟုတ်ပါဘူး။
Wifi Security ကို ဘယ်လို ဖောက်မရမလည်းဆိုတာနဲ့ ဘယ်လို ကာကွယ်ရမလည်းဆိုတာကို သာရှင်းပြ
ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစာအုပ်လေးကိုရေးသားထားသူကတော့3thic0kiddi3 ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
အမျိုးအစား: Ebook , Hacking
Gtalk ရဲ့ Sign ကို အမြဲတမ်းဝါနေချင်သူများအတွက်ပါ။
ကျွန်တော့်ကို အကိုတစ်ယောက်က မေးထားဖူးလို့ ပါဗျာ။ အဲဒီ Bro နဲ့ အခြားသော သူငယ်ချင်းများအတွက် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ရပါတယ်။ဗျာ။ ဘာလေးလည်းဆိုတော့ ဒီကောင်လေးက Gtalk မှာရှိတဲ့ Sign လေးကိုအမြဲတမ်း ၀ါနေအောင်ပြုလုပ်ပေးမယ့် Software လေးဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဦး
ဆုံး ဒီကောင်လေးကို Run လိုက်ပါ။
အမျိုးအစား: Gmail , Internet Tools , Software
Game ဘက်ကိုမလှည့်နိုင်တာ အတော်လေး ကိုကြာသွားပါပြီ။ အခုတော့ Game ကို
မတင်ဖြစ်ပေမယ့် Game နဲ့ပတ်သတ်တာလေးကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Gamer များဆောင်ထားသင့်တဲ့ Software လေးတစ်ခုပါ။ Iobit Game Booster 3.4 လေးပါ။ ဒီကောင်လေးကိုFree ပေးထားပါတယ်။
Game ကစားနေတဲ့ Computer မှာ Install လုပ်ထားသင့်ပါတယ်။ Game တွေကစားတာများလာပြီဆို
ရင်CPU နဲ့ RAM ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ဟာ ကျဆင်းသွားတက်ပါတယ်။
PDF to All (Okdo Converder)
အခုကျွန်တော်အားလုံးကိုမျှဝေပေးချင်တဲ့ Software လေးကတော့ Microsoft Office 2003 , 2007 , 2010 တို့ရဲ့ Excel , word , Power Point စတာတွေကို PDF အဖြစ်လွယ်ကူစွာပြောင်း
လည်း နိုင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး Photo File များဖြစ်တဲ့ jpeg , jpg , bmp , tif , png , gif စတာတွေကို
လည်း Pdf အဖြစ်ပြောင်းလည်းပေးနိုင်ပါတယ်။ အများအားဖြင့် အသုံးလိုနိုင်တဲ့ Software လေးဖြစ်လို့
Blog တွင် ပုံလေးများကို Link ထည့်ပြီး အောက်မှအပေါ်သို့တက်အောင်ပြုလုပ်နည်း
Cbox မှာ Bro- Lin Zar Ni က ဒီလိုတောင်းထားလို့ ကျွန်တော်တင်ပေးလိုက်ရပါတယ်ဗျာ။
အစ်ကိုရေ ဘယ်ဘက်ခြမ်းမှာ တင်ထားတဲ့ ဆိုက်လမ်းညွှန် တွေကို ဘယ်နေ ရာက ရနိုင်သလဲဆိုတာ ပြောပေးပါနော်။
ပြုလုပ်နည်းကတော့လွယ်ပါတယ်ဗျာ။ အောက်မှာ ကျွန်ပြထားတဲ့အတိုင်းအဆင့်လိုက်လုပ်
သွားပြီးတော့ ပေးထားတဲ့ Code လေးတွေကိုထည့်လိုက်ရင်အဆင်ပြေသွားပါပြီဗျာ။
Blog တွင် နောက်ဆုံး Post များအား Slide Show ပုံစံပြုလုပ်နည်း
ကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်တော့ Blog နဲ့ဆိုင်တဲ့ HTML Code လေးကို မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဘာလေးလည်းဆိုတော့ မိမိရဲ့ Blog မှာ နောက်ဆုံးတင်ခဲ့တဲ့ Post တွေကို Slide Show ပုံစံလေးနဲ့
ပြပေးမယ့် Code လေးဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ထည့်သွင်းပုံအဆင့်ဆင့်ကိုလည်း အောက်မှာသေချာစွာရေးပေး
PC ကိုပိုမိုမြန်ဆန်လာစေသည့် Auslogics BoostSpeed V...
iOS 5.1 အား Jailbreak လုပ်နည်း (Tethered Jailbreak...
မိမိလက်မခံချင်တဲ့ ဖုန်းနံပါတ်တွေကို Block လုပ်ပေးမ...
Adobe Illustrator အသုံးပြုနည်း မြန်မာဘာသာပြန် (Ebo...
Windows Loader V 2.1.2 (Window7, Vista , Server ...
Internet ကနေပြီး Mobile Phone များသို့ အလကား Messa...
မကြည့်စေချင်တဲ့ Website တွေကိုပိတ်ပေးနိုင်တဲ့ Anti...
Internet Connection ကိုမျှဝေပေးမယ့် Connectify 3.4...
Android V3.2.6 Phone များအတွက် Spider-Man Total M...
English to Myanmar dictionary for Iphone,Ipad,Ipod...
Gtalk မှာ မိမိနားထောင်နေတဲ့သီချင်း ကိုပေါ်နေစေဖို့အ...
Dfx Audio Enhancer (အသံနှစ်ဆပိုကျယ်စေရန်နှင့် Audi...
Window အားလုံးရဲ့ Password တွေကို ကျော်ချင်သူများ...
Blog တွင် ပုံလေးများကို Link ထည့်ပြီး အောက်မှအပေါ်သ...
Blog တွင် နောက်ဆုံး Post များအား Slide Show ပုံစြံ...